Baladweyne: Wasiirkii Amniga DFKMG Cumar Xaashi iyo Danjirahii Hore DFKMG u Fadhiyey Itoobiya Cabdikariim Faarax "Laqanyo"oo Qarax Lagu Dilay..
Baladweyne: Wasiirkii Amniga DFKMG Cumar Xaashi iyo Danjirahii Hore DFKMG u Fadhiyey Itoobiya Cabdikariim Faarax "Laqanyo"oo Qarax Lagu Dilay...
Khamiis June 18, 2009: Wararka ka imanaya magaalada Baladweyne ayaa sheegay in halkaas ay ku geeriyoodeen Wasiirkii Aminga Qaranka DFKMG Cumar Xaashi Aaden iyo dajire Cabdikariim Faarax "Laqanyo", kaddib markii lala beegsadaay qarax bambaano gaari.
Madaxweynaha DFKMG oo ka hadlaya dilka Wasiirka iyo Danjiraha Halkan ka dhagayso (bbc)
Taliyihii Ciidanka Birmadka Boosaaso iyo Askari Kale oo lagu Diley Boosaaso iyo Ninkii dilka Gaystay oo la qabtay...
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegay in maanta (Khamiis June 19, 2009) in la dilay Taliyihii Ciidanka Birmadka Yuusuf Maxamuud Cali Jagaf iyo askari kale oo ka mid ah ciidamada birmadka ayaa lagu dilay tacshiirad. Sida ay sheegtay idaacada SBC waxaa "dilkaasi geystay qof ku labisnaa dharka ciidamada kaasi oo rasaas ku furay ciidamada booliska oo ku sugnaa xarunta qeybta Booliska ee gobolka Bari, kaasi oo markii dambana isaga baxsaday halkaasi." Laakiin markii dambe ay ciidanka boolisku soo qabteen ninkaas dilka gaystay, waxaana lagu xiray saldhiga ciidanka ammaanka.
Warkii Idaacadda DANAN: Wasiirka Amniga Qaranka Somaaliya Cumar Xaashi Aadan iyo Safiirka Somaaliya u fadhiyo dalka ethopiya oo ku geeriyooday Qarax ismadin oo ka dhacay Magaaladda Baladwayne
Qarax ismaadin ahaa oo goordhow ka dhacay Magaaladda Baladwayne ee Gobolka Hiraan ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geereyodeen wasiirka Amniga Qaranka Somaaliya Cumar Xaashi Aadan iyo safiirkii (hore) ee Dowladda Somaaliya u fadhiyay dalka Ethopiya C/rakiin Laqanyo .
Dhimashada Labadaan Mas’uul ayaa timid ka gadaal markii uu qof naftii hura ah uu isku Qarxiyay Hotel ay ku yaala Magaaladda Baladwayne oo ay deganaayeen Mas’uuliyiintaas.
Hotel Madiina oo ahaa Hotelka uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa deganaa Xubno ka tirsan Dowladda Somaaliya oo ay ka mid ahayeen Duqii hore ee Magaaladda Baladwayne iyo C/kariin laqanyo iyo Cumar Xaashi aadan .
Waxaana qaraxa la sheegay in ay gaysteen 3-ruux uu xaqiijiyay mid ka mid ah mas’uuliyiintii ku sugneed Goobta uu qaraxa ka dhacay.
Si kastaba ha ahaatee waa qarixi ugu horeeyay oo ku geeriyoodaan Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda KMG Somaaliya.
BBC Somali ayaa qortay warkan: Wasiirkii amniga dowladda oo la dilay
Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, Yuusuf Axmed Xagar, ayaa BBC-da u xaqiijiyay in ay qarax bomb baabuur ay ku dhinteen wasiirkii amniga qaranka ee dowladda ku meelgaarka, Cumar Xaashi Aadan iyo safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay magaalada Addis Ababa, Cabdikariin Faarax Laqanyo iyo dad kale oo ay ku jiraan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan.
Dhinaca kale, Madaxwaynaha dowladda Ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, ayaa ka hadlay dilka wasiirkii amniga iyo safiirkii hore ee Soomaalida u fadhiyay magaalada Addis Ababa.
Taariikh nololeedka Wasiirka Amniga
Cumar Xaashi Aadan oo ahaa wasiirka amaaanka isla markaana ka tirsanaa baarlamaanka, dilkiisu waxa uu sababi karo ma cadda laakiin markasta waa jug weyn oo soo gaartay dowladda Kmg ah ee Soomaaliya.
Cumar xaashi waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiishii militeriga Soomaaliya waxaana uu ka mid ahaa, ragga markiiba kaalin weyn ka qaatay siyaasadda Muqdisho, in yar kadib markii uu burburay Qaranka Soomaaliya horaantii 1991.
Waxaa uu ka mid ahaa Hogaamiye kooxeedyadii bari hore gacan saarka la yeeshay ciidamada Ethiopia, laakiin sanadkii 2006, bishii dec markii ciidamada Ethiopia ay qabsadeen gobollo badan oo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya oo ay ka mid tahay caasiamada Muqdishoi.
Cumar Xaashi waxa uu ka mid noqday isbahaysiga dib u xoreynta kaas oo dagaal la galay ciidanka Ethiopia ee ku sugnaa gudaha Soomaaliya.
Waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii isbahaysiga ugu hooreeyay ee ka soo guurra magaalada Asmara ee waddanka Eruitrea oo xaruun u ahayd isbahaysiga.
Waxaana uu galay gudaha Soomaaliya halkaasi oo uu ka qeybgalau dagaal dhuumaaleysi ah oo ka dhan ahaa ciidamada Ethiopia.
Hadda inta aanu beledweyne soo gaarin waxa uu ka yimid magaalada Godey ee dalka Ethiopia.
VOA Somaliga ayaa qortay warkan: Wasiirkii Amniga oo Ku Dhintay Qarax
By Abdusalam M Jama
Cumar Xaashi Aadan
Wasiirkii Amniga Qaranka ee Dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya Cumar Xaashi Aadan iyo ugu yaraan 10 qof oo kale ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Baladwayne ee Gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Sheekh Cabdiraxman Ibrahim ayaa VOA-da u xaqiijiyay dhimashada wasiirka, danjiro Cabdikariim Faarax Laqanyo iyo waliba qaar ka mida odayaaha dhaqanka ee Baladwayne.Wasiirka ayaa xilliga qaraxu haleelay ka sii baxayay Hotelkiisa una sii socday munaasab nixaak oo loo sameeynayay wiilkiisa. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyuhu waxa uu xaqiijiyay in dadka dhintay ayan ku jirin guddoomiyihii hore ee gobolka Yuusuf Daba-geed.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in ay xilli hore tahay in la sheego tirada rasmiga ah ee ku dhintay qaraxa iyo xittaa in la aqoonsado shakhsiyaddooda, sababtuna tahay qaraxa oo si wayn u jarjaray korkooda.
Xaaladda magaalada Baladwayne ayaa aad u kacsan, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka waxuuna intaa ku daray in ay dadaalayaan sidii ay ammaanka ku sugi lahaayeen.
Inkata oo uu guddoomiyuhu sheegin jihada mas’uulka ka ah qaraxa, ayaa haddana war dhawaan ka soo baxay kooxda Alshabab waxa ay ku sheegteen mas’uuliyadda uusan garanayn jihada ka dambaysa qaraxa.Afhayeenka kooxdaas Sheekh Cali Maxamuud Raage oo hadal soo saaray ayaa sheegtay in qaraxaas iyagu qaadeen, waxayna sheegeen in ay halkaasi sidoo kale ku dhinteen saraakiil Itoobiyaan ah.Ma jirto jiho madax bannaan oo arintaas xaqiijisay.
Isha: VOA Somali
Taliyihii ciidanka Booliiska Gobolka Banaadir oo ku geeriyooday dagaalkii Saakay Muqdisho ka dhacay.
Faafin : SomaliTalk.com | June 18, 2009